दुविधामा जसपा : एजेण्डाका हिसाबले कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्नैपर्ने बाध्यता ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दुविधामा जसपा : एजेण्डाका हिसाबले कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्नैपर्ने बाध्यता !
दुविधामा जसपा : एजेण्डाका हिसाबले कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्नैपर्ने बाध्यता !
फागुन २७ गते, २०७७ - १०:२१
पार्टीभित्रको विवादका कारण जसपाभित्रको राजपा पृष्ठभूमिका नेता अझ धेरै तानातानमा देखिएका छन् । समाजवादी पृष्ठभूमिका नेता भने केहीबाहेक ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा छन्।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीभित्र ओलीसँग सत्ता समीकरण गर्न नहुने मत बलियो देखिएको छ ।
तत्कालको फाइदाका लागि सिंगो राजनीतिक कोर्स नै उल्टो दिशामा लैजान भूमिका खेल्न नहुने भन्दै अग्रगमनका पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने मत बलियो देखिएको हो ।
जसपाभित्र नेता महन्थ ठाकुरलगायत केहीले ओलीसँग मिल्नुपर्ने मत राखेपनि त्यो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने रणनीति मात्रै भएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।
जसपाको संसदीय दलमा भएको छलफलमा राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले एमाले नभई माओवादीसँग मिलेर सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो ।
ओलीले नै जसपा विभाजन गर्न खोजेको, संघीयता खारेज गर्न खोजेको र देशलाई २०४७ तर्फ लैजान खोजेको भन्दै बहुमत नेताहरुले ओली प्रवृत्ति घातक भएको निश्कर्ष निकालेका थिए ।
नेता महन्थ ठाकुर र यसअघि असन्तुष्ट भइ दल विभाजन गर्ने प्रयास गरेकाहरुले भने ओलीले सबै माग मान्ने भएकोले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर ओलीले ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने र भनेजति मन्त्रालय दिने सहमति गरेको खुलासा भएसँगै यसको समेत बिरोध भएको हो ।
यही विवादका कारण जसपाले दुबैपक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ । उसले रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । टिकापुर घटनामा माओवादी पनि जसपाजस्तै समान धारणा राख्छ । जबकि ओली पक्षमा लागेका सुदूरपश्चिमका नेताहरु भने थारु मनोविज्ञानविरोधी भएको आरोप बेला बेला लाग्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रले साथ छोडे नपुग १८ मतका लागि ओलीले जसपाभित्रको राजपा पृष्ठभूमिका नेतालाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
सम्भावित समीकरणका लागि माओवादी केन्द्र र जसपाको बैठक बुधबार सम्पन्न भएको थियो । जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा छलफल गरेका थिए ।
‘प्रचण्डजीले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । हामी सधैं अरूलाई मात्रै सहयोग गरिरहने, हाम्रा मुद्दा र माग चै कसैले पुरा नगर्ने, के हामी सहयोग गर्नका लागि मात्रै जन्मिएका हौ र भनेर जवाफ दियौं’, जसपाका नेता महतोले भने ।
प्रचण्डले जसपाका नेताहरुसँग प्रतिनिधीसभा विघटनपछिको कदमविरुद्ध रहेका शक्तिहरुबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको वताएका थिए । जसपाका नेताहरुले उठाउँदै आएका मागका विषयमा एमालेभन्दा सकारात्मक रहेको दाहालको प्रतिक्रिया थियो ।
जसपाका नेताहरुले काग्रेससँगको विषय पहिले स्पष्ट पार्न पनि प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए।
जसपाका शीर्ष नेताहरुको छलफल बिहीबार बिहान हुने भएको छ।विहान महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, डा वावुराम भटटराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईबीच छलफल हुने जसपा स्रोतले वताएको छ ।
जसपाको पूर्वराजपा महन्थ र राजेन्द्र महतो पक्षसँग १७ जना सांसद छन्।ओलीले ति सांसदलाई साथ लिने योजना वनाएका छन्।त्यस्तै अपुग सांसद जसपाभित्रको पूर्व समाजवादीतर्फका लिन खोजेका छन् ।
तत्कालीन समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव नेतृत्वमा असन्तुष्ट सांसदहरू मो. इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मालगायतले छुट्टै दल गठनको प्रयास खोजेका थिए।सोही कारण जसपको संसदीय दलमा ठाकुर र महतो पक्ष वहुमतमा छ ।
जसपाका ३४ सांसदमध्ये हरिनारायण रौनियार निलम्वनमा र रेशम चौधरी जेलमा रहेका कारण ३२ जना छन् । ओलीलाई माओवादीका ४ सांसद (साथ दिने तयारीमा रहेकालाई छोडेर भए पनि) १८ सांसद थप आवश्यक पर्छ । जसपाभित्रकै राजपाका १७ र समाजवादीभित्र पनि आफुतिर लचिलो रहेका केही सांसदको साथ ओलीले खोजि गरिरहेका छन्। यसो भए ओलीले १३८ मत पुराउने सम्भावना देखिएको छ ।
फागुन २७ गते, २०७७ - १०:२१ मा प्रकाशित